Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Dalxiiska Puerto Rico Hadda Waa Horumar
Puerto Rico waxay leedahay boqolleyda ugu badan ee dadka si buuxda uga tallaalay cudurka 'coronavirus' gudaha Mareykanka Oktoobar 19, marka loo eego xogta Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada. Tani ma sababta dalxiisku halkan ugu kobcayo?
Dashboard-ka Soo-kabashada Ururka Socdaalka ee Mareykanka oo wata xogta dhaqaalaha Dalxiiska ayaa muujineysa Puerto Rico inay tahay hogaamiyaha soo kabashada. Marka la isbarbardhigo kharashaadka billaha ah, celcelis ahaan, Mareykanka wuxuu qiyaastii 11% ka hooseeyay isla waqtigaas laba sano ka hor bishii Sebtembar. Laakiin kharashka safarka ee Puerto Rico ayaa ka badan 23% ka sarreeya calaamadaas. In kasta oo siddeed gobol oo Maraykan ah ay arkayaan heerarka kharashka booqdaha ee ka sarreeya 2019, waxay u dhexeeyaan inta u dhaxaysa 1% iyo 9% ka sarreeya halka kharashka booqashada Puerto Rico uu 23% ka sarreeyay laba sano ka hor.
Caafimaad qaba 73% wadarta guud ee dadweynaha Puerto Rico oo ah 3.3 milyan ayaa si buuxda looga tallaalay fayraska, marka loo eego xogta CDC. Dhulka Maraykanku waxa kale oo uu leeyahay mid ka mid ah heerarka gudbinta bulshada ee ugu hooseeya ee COVID-ka gudaha Maraykanka, iyada oo 18 kiis oo keliya la xaqiijiyey 100,000 oo degane todobadii maalmood ee la soo dhaafay.
Isbeddelladan togan ayaa kor u qaadaya meelaha safarka ee Jasiiradda, oo aan ugu yareyn golf. Puerto Rico 18-ka kooras, xeebaha, iyo meelaha kale ee kuleylka leh waxay ku habboon yihiin nasashada iyo dib u soo kabashada inta lagu jiro dayrta iyo jiilaalka, marka heerkulku celcelis ahaan 80syada.
Golf wuxuu ku barwaaqoobay Puerto Rico inta lagu jiro aafada, taasoo ka timid badbaadada iyo fogeynta bulshada ee laga helay ciyaarta iyo Jasiiradda. Koorasyadu waxay u dhexeeyaan raaxo ilaa degmo, oo ku baahsan Puerto Rico oo leh dhowr San Juan u dhow. Aragtida dhinaca badweynta, geedaha qumbaha, iyo vistas kaynta roobka waxay qaabeeyaan goobahooda. Qodobbada qiimaha, dhulka, qaabka qaabaynta, iyo adeegyada la xidhiidha way kala duwan yihiin oo is dhammaystirayaan.
Jasiiraddu waa xudunta hawada ee Kariibiyaanka. Saaxiibtinimada socotada dheeraadka ah waxaa laga helaa dhaqanka laba-luqadlaha ah ee Puerto Rico, lacagta Mareykanka, iyo baasaboorna loogama baahna muwaadiniinta Mareykanka.